जब गर्भवती श्रीमतीका अगाडी श्रीमानको गर्दन छिन्यो ! – Etajakhabar
जब गर्भवती श्रीमतीका अगाडी श्रीमानको गर्दन छिन्यो !
एजेन्सी – भारतको तेलंगाना प्रदेशको नालगोंडा जिल्लाको एक अस्पतालबाहिर २४ वर्षीय पेरुमाल्ला प्रणयको उनकै गर्भवती श्रीमती अमृताको अगाडि हत्या भएको छ । अस्पतालमा श्रीमतीको स्वास्थ्य जँचाउन डाक्टरलाई भेटेर उनीहरु बाहिर निस्कँदै गर्दा उनको हत्या भएको हो ।
उनलाई पछाडिबाट एक व्यक्तिले धारिलो हतियारले प्रणयको गर्दन छिनाइदिएका छन । प्रणयको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ ।
जिल्लाका एसपी रंगनाथले पत्रकारसंग कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘हामीहरु यसलाई अनर किलिङ मानेर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । प्रणय दलित समुदायका हुन् भने अमृता वैश्य । अमृताका बुवा रियल स्टेट व्यवसायी हुन् । प्रहरीले हत्याको पछाडि अमृताकै बुवाको हात हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धान सुरु गरेको बताएको छ ।एजेन्सी – भारतको तेलंगाना प्रदेशको नालगोंडा जिल्लाको एक अस्पतालबाहिर २४ वर्षीय पेरुमाल्ला प्रणयको उनकै गर्भवती श्रीमती अमृताको अगाडि हत्या भएको छ ।
अस्पतालमा श्रीमतीको स्वास्थ्य जँचाउन डाक्टरलाई भेटेर उनीहरु बाहिर निस्कँदै गर्दा उनको हत्या भएको हो । उनलाई पछाडिबाट एक व्यक्तिले धारिलो हतियारले प्रणयको गर्दन छिनाइदिएका छन । प्रणयको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । प्रणय र अमृताले यसै वर्षको जनवरी ३१ मा प्रेम विवाह गरेका थिए । यो विवाहबाट दुवै जनाका परिवार सन्तुष्ट नभएको बताइएको छ । तर, प्रणयको परिवारले भने केही समयपछि दुवैको विवाहलाई स्वीकारेको थिए । अमृताको परिवार भने विवाहबाट खुसी थिएनन् । प्रहरीका अनुसार प्रणयको हत्यापछाडि अमृताको परिवारको हात हुन सक्ने आशंका गरेको छ ।
जिल्लाका एसपी रंगनाथले पत्रकारसंग कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘हामीहरु यसलाई अनर किलिङ मानेर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । प्रणय दलित समुदायका हुन् भने अमृता वैश्य । अमृताका बुवा रियल स्टेट व्यवसायी हुन् । प्रहरीले हत्याको पछाडि अमृताकै बुवाको हात हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धान सुरु गरेको बताएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आश्विन ०२, २०७५ समय: ९:३६:०५